Nike's SNKRS wuxuu ku keenayaa Xaqiiqada Kordhinta App-ka iOS | Wararka IPhone
Taleefan casri ah, Daacad dhab ah iyo kabaha Nike… maxaa khaldami kara? Xaqiiqdii waxba, waana inay yihiin seddex shey oo moodal buuxa ah isla markaana isu yimid si ay macaamiishooda u qanciyaan xitaa inbadan. Sanadihii la soo dhaafay, xamaasad isboorti iyo qaab magaalo ayaa soo maray, waxayna umuuqataa in Xaqiiqada Daabacaadda ay wehel weyn u noqon doonto alaabada noocan ah.
Barnaamij muhiim ah waa shirkadda Nike ee SNKRS, halkaas oo aad kula socon karto sii deynta ugu dambeysa. Waa hagaag Hadda Nike waxay ka faa'iideysan doontaa Xaqiiqda Dareenka si loo dhiirrigeliyo nuxurkeeda cusub iyada oo si gaar ah loo bilaabay magaalooyinka. Shaki la'aan, Xaqiiqada Aakhirka ayaa si isa soo taraysa ugu jirta maalinteena maanta.
Tani waxay ahayd wararka kooxda Nike maanta ku dhawaaqday:
Codsiga ayaa hadda na tusi kara fursadda aan ku iibsanno kabo gaar ah oo leh keyd aad u kooban, tan waxaan uga faa'iideysan karnaa sawir lagu dhejin doono calaamadaha waddooyinka qaarkood. Kaliya waxaan ka daawan karnaa oo aan ku iibsan karnaa kabahaas adoo adeegsanaya xaqiiqda 'Augmented Reality', oo ah muuqaal cusub oo ku yimid kamaradda SNKRS, codsiga iOS. Midka koowaad wuxuu noqon doonaa Nike SB Dunk High Pro «Momofuku».
Shaki nagagama jiro inay tahay istaraatijiyad ganacsi oo aad u xiiso badan taasina waxay ka dhigeysaa dadka isticmaala inay la qabsadaan Xaqiiqada 'Augmented Reality', oo ah goob tijaabo ah si loo arko haddii dadka isticmaala ay dhab ahaan la qabsadeen tikniyoolajiyadda noocan ah oo si weyn u yareyn karta kharashka ku baxa daaqadaha dukaanada iyo inbadan. Laakiin si daacad ah, ma rajeynayo inay imaan doonto maalin aan kaliya aragno waxyaabaha aan dooneyno inaan ku kasbano Xaqiiqada Dareenka leh, waxaan qiyaasayaa in bakhaarada ay ka buuxaan dadka diiradda saaraya darbiga qalabkooda gacanta waxayna abuureysaa dareen la yaab leh. VAan aragno sida dhabta ah ee loo yaqaan 'Augmented Reality', taas oo Apple ay wax badan ku sharraxday.
Nike SNKRS: Siideynta Sneakerfree
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Nike's SNKRS wuxuu ku keenayaa Xaqiiqada Kordhinta App-ka iOS
Tani waa sida quruxda badan ee muuqaalkan iPhone 8 u eg yahay